Yusuf Garaad: Farriinta John Kerry
Tarjumo aan Rasmi ahayn
Maanta waxaa sharaf ii ah in aan noqday Xogayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka ee ugu horreeyay ee booqda Soomaaliya.
Waxaan la kulmay hoggaamiyayaasha Dowladdiinna iyo wakiillo bulshada rayidka.
Laakiin waxaa kale oo aan rabaa in aan fursadda ka faa’iideysto oo aan idinla hadlo dadka Soomaaliyeedow.
In ka badan 20 sano mar laga joogo, Mareykanka waxaa lagu khasbay in uu ka baxo waddankiinna. Hadda waan soo laabaneynaa annaga oo la kaashaneyna beesha caalamka. Annaga oo rajo weyn qabna, laakiin uu ku dhafan yahay walaaca jira.
Booqashadeyda gaaban waxay ii xaqiijisay wixii diblomaasiyiintayadu ay ii sheegi jireen. In Soomaalidu ay tahay dad adkeysi badan, ayna idinka go’an tahay in dalkiinna iyo mustaqblkiinna aad dib uga hanataan arga-gixisada iyo kooxaha malliishiyada ah ee isku dayay in ay idinka qaataan.
Rubuc qarnigii na dhaafay waxaa idin soo maray xanuun aad u badan. Oo idiinka yimid dagaal, dembiilayaal, dhib xag jir, cunto yari ba’an iyo in aad nabad ku joogi kari weydeen xataa tuulooyinkiinna iyo guryihiinna.
Waxaan shalay Kenya kula hadlay qaxooti ka yimid Dhadhaab oo guryahoodii ka soo qaxay si looga magan geliyo waxyeello, baqdin iyo dagaal.
Waxaan la kulmay 15 jir ah, 18 jir iyo 20 jir Soomaali ah oo aan weligood ku noolaan meel aan ahayn xero qaxooti, ayada oo lagu jiro xilli aan asaga oo kale hore noo soo marin oo dunidu ay koobnaatay.
Laakiin Soomaaliya ayaan maanta imid sababta oo ah dalkiinnu wuu is beddelayaa. Saddex sano ayaa ka soo wareegtay markii Dastuur cusub oo KMG ah la qaatay. Baarlamaan la dhaariyay.
Ayaga oo taageero ka helaya AMISOM, ciidammada Soomaaliya waxay al Shabaab ka saareen xarumiha ay dadku ku badan yihiin. Dadaal caalami ah oo ujeeddeysan waxaa uu suuqooda soo xiray ku dhowaad dhammaan burcad badeeddii Soomaaliya.
Abaalka badankiis idinka oo ah dadka Soomaaliya ayaa leh. Idinka dartiin ayay nolol cusubi ku soo laabatay waddooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhaba iyo Garowe iyo meelo kale. Ganacsiyo hor leh ayaa la furay. Qurbo joogtuna wey soo laabanayaan si ay uga faa’iideystaan fursadaha dhaqaale ee cusub iyo si ay gacan uga geystaan dib u dhiska dalkooda.
Dabcan shaqo badan ayaa harsan si dalkiinna loogu xaqiijiyo mustaqbal nabad ah oo wax soo saar leh. Waan fahamsan nahay taas. Intii aan maanta wadahadalka kula jiray madaxdiinnana, waxaan culeyska saaray tallaabooyinka soo socda ee ay tahay in la qaado ee Higsiga 2016, si kor loogu qaado horumarka Soomaaliya iyada oo mideysan haddana Federaal ah.
Dowladda Federaalku waxay hadda la shaqeyneysaa Maamul Goboleedyada Cusub, si loo xoojiyo xasilloonida looguna abuuro miraha wax soo saarka qeyb kasta oo ka mid ah Soomaaliya. Waxaa taas ka mid ah in la helo miisaanka saxda ah ee awoodaha iyo mas’uuliyadaha ay kala leeyihiin Federaalka, Gobollada iyo dowladaha hoose.
Waxaanna rajeynayaa in aan mar dhow arki doono horumar laga sameeyay in ciidammada Gobollada lagu daro ciidanka Qaran ee Soomaaliya si aan u awoodno in aan ballaarinno taageeradeenna amni ee xoogaggaas.
Dowladdu waxay kale oo ay ka shaqeyneysaa dhammeystirka dastuurka iyo qabashada doorashooyin dimuqraaddi ah 2016. Adinku, waa adinka dhammaantiin, waa khasab in aad cod ku lahaataan howshaas.
Madaxdiinnu waxay mar kale maanta ii xaqiijiyeen in ay ka go’an tahay in ay horumar ka sameeyaan arrimahaas. Iyo in ay xaqiijiyaan in is afgarad baahsan laga gaaro sida ay dib u eegista dastuurku u dhaceyso iyo sida doorashooyinku ay u qabsoomi doonaan.
Kulligeen waxay dani noogu jirtaa guushiinna. Dunidu ma xammili karto goobo khariidadda ku yaal oo aan maamul lahayn. Taas ayaa u sabab ah in Soomaaliya ay ka dhisanto dowlad waxgal ah in ay tahay fursad taariikhi ah.
Aqoonsiga horumarka la sameeyay iyo tallaabiyinka la ballan qaaday dartood, waxaan ku faraxsan ahay in aan ku dhawaaqo in Mareykanku uu billaabayo shaqada lagu suurta gelinayo howlgal diplomaasi oo Muqdisho ka hirgala. Inkasta oo aynaan qabsan taariikh go’an oo si rasmi ah Safaaradda dib loogu furayo, waxaan kor u qaadeynaa wakaaladdeenna diblomaasi.
Ayada oo ay rahman tahay ansixinta Senate-ka, Diblomaasi ruug caddaa ah, ayaa hoggaamin doona dadaalkaas. Waxaana uu ahaan doonaa Danjirihayagii ugu horreeyay ee Soomaaliya tan iyo markii aan xirnay safaaraddayadii Jannaayo 1991.
Waxaan dhowrayaa, Madaxweynuhuna sidoo kale, maalinta Mareykanka iyo Soomaaliya uu mid waliba kan kale caasimaddiisa ku lahaan doono Safaarad dhammaystiran.
Waxaa kale oo aan dhowrayaa marka aan dhihi kari doonno, ayada oo caalamka oo dhami uu arkayo hubinna karo, in dalkani uu si buuxda u mideysan yahay. Uu awood Goboleed ku biirinayo Himilo Qaran. Awood u yeesho in uu qaxootigiisa dib ugu soo dhoweeyo dalka. Uuna xaqiijiyo Soomaaliya cusub oo maqaam sharaf leh ku leh Golayaasha heer Gobol iyo kawa heer Caalami, qarniyo badan. Howshaasi waa midda adinka oo keliya - dadka Soomaaliyeedow aad keligiin qaban kartaan.
Ayada oo ay kala mid yihiin xubno badan oo beesha caalamka ah, Dowladda Mareykanku waxay diyaar u tahay in ay sameyso wax kasta oo aan karno si aan u caawinno Soomaaliya, in ay gaarto amniga, horumarka iyo nabadgelyada aad mudan tihiin.
Waad mahadsan tihiin dhammaantiin.
Posted by Yusuf Garaad at 20:29:00